कोरोनाको त्रासले फ्लिम प्रदर्सन मिति सर्दै निर्देशकहरु। - Ujyaalo Sandesh Online
कोरोनाको त्रासले फ्लिम प्रदर्सन मिति सर्दै निर्देशकहरु।
काठमाडौँ — सुदर्शन थापा निर्देशित ‘म यस्तो गीत गाउँछु २’ले भर्खरै फिल्मको प्रदर्शन मिति स्थगित गरेको छ। कोरोना भाइरसको कारण यहि फागुन ३० गते प्रदर्शन गर्ने भनिएको फिल्मको मिति स्थगित गरिएको सुदर्शन थापाले बताए ।
‘म यस्तो गीत गाउँछु २’ र ‘नीरफूल’ कोरोनाबाट प्रभावित केहि पात्र फिल्म हुन्। यी दुई मात्र होइन प्रदर्शनको तयारीमा रहेको धेरै फिल्ममा भाइरसको प्रभाव देखिएको छ। ‘लक्का जवान’का निर्माता किरण केसी अहिले तनावमा छन्। फिल्मलाई चैत २१ मा प्रदर्शनमा ल्याउन उनका टिम तयार थिए। दर्शकको राम्रो प्रतिक्रिया पाउनेमा आशावादी पनि तर बीचमा कोरोनाको प्रभावले अहिले फिल्मको प्रदर्शन दोधारमा परेको उनी बताउँछन्।
‘कोरोनाले हाम्रो फिल्मलाई धेरै प्रभाव पार्‍यो नि। रुनु न हाँस्‍नु भएको छौ। यो कोरोना किन आएको होला। हामीले कसको परिवारको के चाहिँ बिगारिदिएका थियौं। हाम्रो फिल्म रिलिज हुने बेलामा आइदियो,’ उनले रेला गर्दै आफ्नो दुखेसो पोखे, ‘अब फिल्म चैत २१ मै रिलिज गरिदियौं भने दर्शक नआइदिनु हो कि भन्‍ने पीर छ र धेरै तनाव भएको छ। के गर्ने के नगर्ने, अलमलमा परियो।’
‘परिवारका सबै सदस्य स्वस्थ हुँदा सबै आनन्द मनाउन आउने ठाउँ हो हल। तर अहिले त प्रत्येक परिवारमा कोरोना त्रास छ। अब फेरी फिल्म हलमा गुम्सेर फिल्म हेर्नुपर्ने हुन्छ नि त ! त्यसैले फिल्मको रिलिजलाई लिएर म दोधारमा छु। अब चैत ३० गते मिटिङ गरेर निर्णय लिन्छौं,’ उनले बताए।
हल नै बन्द भयो भने ‘चपली हाइट ३’ प्रदर्शन स्थगित हुने निर्माता अर्जुन कुमारले बताए। ‘फिल्‍मलाई अहिलेसम्म ‘कोरोना’ लागिसकेको छैन। हल नै बन्द भयो भने कसले के गर्न सक्छ र? हाम्रो फिल्म पनि सर्छ। हल बन्द भएन भने चारजनालाई पनि फिल्म देखाउँछौं,’ अर्जुनले भने, ‘फिल्म प्रदर्शनमा आउन अब एक महिना मात्रै बाँकी छ। नेपालमा हल्ला मात्र बढी भइरहेको छ।’
यस्तै, प्रदर्शनको तयारीमा रहेको अर्को फिल्म हो ‘प्रेमगीत ३’। कोरोनाको प्रभाव गम्भीर भए मात्र फिल्म सार्ने निर्देशक छेतेन गुरुङ बताउँछन्। ‘हाम्रो फिल्मलाई प्रभाव परेको छैन। नेपालीहरुको डराउने बानी छ। तर डराइ हाल्नुपर्ने अवस्था देख्दिँन। अब कोरोना लागेर मान्छे मर्न थाल्यो भने चाहीँ फिल्म सार्छौं।’
दमकमा टेम्पो दुर्घटना हुदा एक मृत्यु।